Gabadhii faroxumeynta macallinka dugsiga ka cabatay ee dabka la qabadsiiyay | Warmaalnews.com
Hase yeeshee taas baddalkeeda waxaa muuqaal telefoonkiisa uga duubay askarigii mas’uulka ka ahaa saldhigga ay u dacwootay.
‘Waxaan isku dayay inaan dugsiga geeyo’
Lahaanshaha sawirkaNURPHOTO/GETTY IMAGES
Image captionDibadbaxyo looga soo horjeedo tacaddiyada gabdhaha ayaa ka dhacay Bangladesh
“Waxaan isku dayay inaan walaashey u kaxeeyo dugsiga waxaana damcay inaan gudaha la galo, laakiin waa la iga hor istaagay inaan la galo”, waxaa sidaas yidhi Nustar walaalkeed oo lagu magacaabo Mahmudul Hasan Noman.
“Haddii aan la iga celin lahayn inaan gudaha galo, wax sidaan oo kale ah kuma dhici lahayn walaasheey”, ayuu yidhi.
Lahaanshaha sawirkaSHAHADAT HOSSAIN
Image captionNusrat walaakeed oo barooranaya
Banaj Kumar Majumder oo ah madaxa waaxda dambi barista ee booliska ayaa sheegay in dhalinyarada dilka geysatay ay damacsanaayeen “inay arrinta u ekeysiiyaan in gabadha ay isdishay”. Hase ahaatee qorshahoodu wuu guul darreysatay markii Nusrat la badbaadiyay ka hor inta aysan goobta ku geeriyoonin. Waxay fursad u heshay inay macluumaad bixiso dhimashadeeda ka hor.
“Mid ka mid ah kuwii dilay ayaa madaxeeda ku celinayay gacmihiisa, sidaas awgeed gaaska laguma shubin meesha uu gacmihiisa ku hayay, taasina waa sababta uusan dabka uga gaarin madaxa”, ayuu yidhi Mr Majumder, oo wareysi siiyay BBC-da.
“Macallinka jirkeyga ayuu taataabtay, waan la dagaallami doonaa dambiga noocan ah ilaa inta ay neefta ugu dambeysa iga baxeyso”, ayaa ka mid ah erayada ku jira codka ay duubtay.
Image captionAaska Nusrat waxaa ka qeyb galay kumannaan ruux
Image captionQoyska gabadhan ayaa aad u murugooday
Ra’iisul wasaaraha Bangladesh, haweeneyda lagu magacaabo Sheikh Hasina ayaa magaalada Dhaka kula kulantay qoyska Nusrat, waxayna u ballan qaadday in qof walba oo dhacdada gabadhooda lagu dilay ku lug lahaa sharciga la hor geyn doono.
Geerida Nusrat waxay abuurtay dibadbaxyo, kumannaan ruux ayaana baraha bulshada ku muujiyay caradooda ku aaddan sida loola dhaqmo gabdhaha dhibaneyaasha u ah tacaddiyada galmada ee ka dhaca dalka Bangladesh